ပရဟိတ လုပ်တာထက် ပိုအကျိုးများမယ့် လုပ်ရပ် – Gentleman Magazine
ပရဟိတ လုပ်တာထက် ပိုအကျိုးများမယ့် လုပ်ရပ်
Google Co-Founder Larry Page က ပြောပါတယ်။ “ခုနေတုန်းမှာ ငါ့ကို Bus ကားတိုက်သွားခဲ့ရင်တော့ ရှိသမျှအားလုံးကို Elon Musk ဆီ လွှဲခဲ့ရမှာပဲ” တဲ့။
တခြားသူဋ္ဌေးတွေအားလုံး သူတို့ရှိတဲ့ ဥစ္စာတွေကို ပရဟိတ အသင်းတွေဆီ လွှဲကြတာ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Page ကတော့ သူ့ငွေတွေက Elon Musk ရဲ့ လက်ထဲမှာ ပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်တာပါ။ Elon Musk ကို မှတ်မိကြပါသလား?? Tesla Motor နဲ့ Space X ရဲ့ CEO.. အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှာ နေဖို့ ကြိုးစားနေသူ.. Real Life Iron Man လို့ တင်စားခြင်း ခံရသူပါ။ Page က Elon Musk ရဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှာ လူနေမှူစနစ်တစ်ခု ဖန်တီးမဲ့ အကြံအစည်ကို အရမ်းကြိုက်တဲ့အကြောင်း အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် သူ အခု Alphabet ကုမ္ပဏီကို ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီလို မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရတဲ့ အိုင်ဒီယာကြီးတွေကို အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ပေါ့။ Page က သူ့ငွေတွေကို လှူပစ်ချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲမယ့် အိုင်ဒီယာတွေအပေါ်မှာ အသုံးချချင်တာပါ။
Page ရဲ့ လုပ်ငန်းက နည်းပညာအသစ်တွေဟာ ငွေတွေလှူနေတာထက် လူသားတွေရဲ့ ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို အခြေခံထားတာပါ။ သမိုင်းမှာလဲ ဒါနမှုထက် နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေက လူတွေကို ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ဥပမာတွေ အထင်အရှား ရှိပါတယ်။
သင့်ကိုယ်သင် Larry Page လို့ ယူဆကြည့်ပါ။ သင်က Billion နဲ့ချီပြီး ချမ်းသာပါတယ်။ အဲဒိအခါမှာ သင့်ငွေတွေကို ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်လှူချင်လာမှာပါ။ ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုခု တည်ထောင်တာဖြစ်ဖြစ်၊ Gates ဖောင်ဒေးရှင်းလို ရှိပြီးသား ဖောင်ဒေးရှင်းထဲ ထည့်ဝင်တာဖြစ်ဖြစ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သင်က ဖောင်ဒေးရှင်း မလုပ်တတ်ဖူး။ ရှိပြီးသားထဲက အကောင်းဆုံးဖောင်ဒေးရှင်းကိုတောင် မရွေးနိုင်ဘူး။ သင်လုပ်နိုင်တာက စီးပွားရေး ထုတ်ကုန်တွေပါ။ အဲဒါတွေကလဲ ကမ္ဘာကြီးကို ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။ Google Map, Gmail, Hangouts နဲ့ Android တို့က လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ ဘဝကို ပိုကောင်းလာအောင် လုပ်ပြပြီးပါပြီ။ အဲဒိဟာထက် ပိုပြီးကြီးကျယ်တဲ့ဟာ ဘာလို့ မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ??
ဒီဟာက Google အတွက်အကျိုးအမြတ်တော့ အရမ်းရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် AT&T က Bell Labs Researcher တွေက Laser, Transistor တွေနဲ့ C, Unix တို့ကို ထွင်ခဲ့တယ်။ AT&T က အကျိုးအမြတ် အရမ်းမယူခဲ့ပါဘူး။ Google က ခေတ်သစ် Bell Labs လုပ်ဖို့ ကြံစည်နေတာပါ။
Alphabet ဟာ Page ကို ပိုပြီး ကြီးထွားတဲ့ ပရောဂျက်တွေအတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးမှာပါ။ အဲဒိ ပရောဂျက်တွေထဲမှာ ကိုယ်တိုင်မောင်းကားတွေ၊ လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်မယ့် စွန်ကြီးတွေ ကနေ အိုမင်းခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့ နည်းတွေ၊ ဘောလုံးတွေနဲ့ Wifi ပေးဖို့ ကိစ္စတွေထိ ပါပါတယ်။ Google ကတော့ Alphabet အောက်မှာ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုအနေနဲ့ Search, Map, Docs, Youtube တို့ကို ဝန်ဆောင်မှု ဆက်ပေးနေမှာပါ။
Page နဲ့ Google တည်ထောင်သူ နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sergey Brin တို့ဟာ Google ပေါ်မှာထက် Alphabet ကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်သွားကြမှာပါ။ သူတို့မှာ Google နဲ့ Alphabet ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ကို လုံးဝ Crazy Idea ကြီးတွေအတွက် လုပ်ကိုင်သွားဖို့ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ခွဲထွက်ဖို့တောင် ပြင်နေပါတယ်။
Page ဟာ Google နဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲချင်နေတာပါ။ Alphabet ကတော့ အဲ့ဒိအတွက် လက်နက်တစ်ခုပါပဲ။
Google Co-Founder Larry Page က ပွောပါတယျ။ “ခုနတေုနျးမှာ ငါ့ကို Bus ကားတိုကျသှားခဲ့ရငျတော့ ရှိသမြှအားလုံးကို Elon Musk ဆီ လှဲခဲ့ရမှာပဲ” တဲ့။
တခွားသူဋ်ဌေးတှအေားလုံး သူတို့ရှိတဲ့ ဥစ်စာတှကေို ပရဟိတ အသငျးတှဆေီ လှဲကွတာ မြားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Page ကတော့ သူ့ငှတှေကေ Elon Musk ရဲ့ လကျထဲမှာ ပိုအဆငျပွမေယျ ထငျတာပါ။ Elon Musk ကို မှတျမိကွပါသလား?? Tesla Motor နဲ့ Space X ရဲ့ CEO.. အင်ျဂါဂွိုဟျပျေါမှာ နဖေို့ ကွိုးစားနသေူ.. Real Life Iron Man လို့ တငျစားခွငျး ခံရသူပါ။ Page က Elon Musk ရဲ့ အင်ျဂါဂွိုဟျပျေါမှာ လူနမှေူစနဈတဈခု ဖနျတီးမဲ့ အကွံအစညျကို အရမျးကွိုကျတဲ့အကွောငျး အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ဖှငျ့ပွောခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ သူ အခု Alphabet ကုမ်ပဏီကို ဖနျတီးခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီလို မဖွဈနိုငျဘူးထငျရတဲ့ အိုငျဒီယာကွီးတှကေို အကောငျအထညျ ဖျောဖို့ပေါ့။ Page က သူ့ငှတှေကေို လှူပဈခငျြတာ မဟုတျပါဘူး။ ကမ်ဘာကို ပွောငျးလဲမယျ့ အိုငျဒီယာတှအေပျေါမှာ အသုံးခခြငျြတာပါ။
Page ရဲ့ လုပျငနျးက နညျးပညာအသဈတှဟော ငှတှေလှေူနတောထကျ လူသားတှရေဲ့ ဘဝကိုပွောငျးလဲပဈနိုငျတယျဆိုတဲ့ အယူအဆကို အခွခေံထားတာပါ။ သမိုငျးမှာလဲ ဒါနမှုထကျ နညျးပညာတိုးတကျမှုတှကေ လူတှကေို ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ဥပမာတှေ အထငျအရှား ရှိပါတယျ။
သငျ့ကိုယျသငျ Larry Page လို့ ယူဆကွညျ့ပါ။ သငျက Billion နဲ့ခြီပွီး ခမျြးသာပါတယျ။ အဲဒိအခါမှာ သငျ့ငှတှေကေို ကမ်ဘာကွီးကို ပွနျလှူခငျြလာမှာပါ။ ဖောငျဒေးရှငျးတဈခုခု တညျထောငျတာဖွဈဖွဈ၊ Gates ဖောငျဒေးရှငျးလို ရှိပွီးသား ဖောငျဒေးရှငျးထဲ ထညျ့ဝငျတာဖွဈဖွဈ လုပျနိုငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သငျက ဖောငျဒေးရှငျး မလုပျတတျဖူး။ ရှိပွီးသားထဲက အကောငျးဆုံးဖောငျဒေးရှငျးကိုတောငျ မရှေးနိုငျဘူး။ သငျလုပျနိုငျတာက စီးပှားရေး ထုတျကုနျတှပေါ။ အဲဒါတှကေလဲ ကမ်ဘာကွီးကို ပိုကောငျးလာစပေါတယျ။ Google Map, Gmail, Hangouts နဲ့ Android တို့က လူသနျးပေါငျးမြားစှာရဲ့ ဘဝကို ပိုကောငျးလာအောငျ လုပျပွပွီးပါပွီ။ အဲဒိဟာထကျ ပိုပွီးကွီးကယျြတဲ့ဟာ ဘာလို့ မလုပျနိုငျရမှာလဲ??
ဒီဟာက Google အတှကျအကြိုးအမွတျတော့ အရမျးရမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ AT&T က Bell Labs Researcher တှကေ Laser, Transistor တှနေဲ့ C, Unix တို့ကို ထှငျခဲ့တယျ။ AT&T က အကြိုးအမွတျ အရမျးမယူခဲ့ပါဘူး။ Google က ခတျေသဈ Bell Labs လုပျဖို့ ကွံစညျနတောပါ။
Alphabet ဟာ Page ကို ပိုပွီး ကွီးထှားတဲ့ ပရောဂကျြတှအေတှကျ လှတျလှတျလပျလပျ လုပျပိုငျခှငျ့ ပေးမှာပါ။ အဲဒိ ပရောဂကျြတှထေဲမှာ ကိုယျတိုငျမောငျးကားတှေ၊ လအေားလြှပျစဈထုတျမယျ့ စှနျကွီးတှေ ကနေ အိုမငျးခွငျး၊ သဆေုံးခွငျးကို ကာကှယျဖို့ နညျးတှေ၊ ဘောလုံးတှနေဲ့ Wifi ပေးဖို့ ကိစ်စတှထေိ ပါပါတယျ။ Google ကတော့ Alphabet အောကျမှာ ကုမ်ပဏီခှဲတဈခုအနနေဲ့ Search, Map, Docs, Youtube တို့ကို ဝနျဆောငျမှု ဆကျပေးနမှောပါ။
Page နဲ့ Google တညျထောငျသူ နောကျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Sergey Brin တို့ဟာ Google ပျေါမှာထကျ Alphabet ကို ပိုပွီး အာရုံစိုကျသှားကွမှာပါ။ သူတို့မှာ Google နဲ့ Alphabet ရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈရပျကို လုံးဝ Crazy Idea ကွီးတှအေတှကျ လုပျကိုငျသှားဖို့ ကုမ်ပဏီတဈခု ခှဲထှကျဖို့တောငျ ပွငျနပေါတယျ။
Page ဟာ Google နဲ့ ကမ်ဘာကွီးကို ပွောငျးလဲခငျြနတောပါ။ Alphabet ကတော့ အဲ့ဒိအတှကျ လကျနကျတဈခုပါပဲ။
Previous: Cyber Dating
Next: အမျိုးသမီးတွေ ပြီးတယ်ဆိုတာ…